Ukugoba kunye notolo tattoos | Ukuzoba
I tattoo yesaphetha kunye notolo, egxile kubugcisa nakwindlela yokuyila
Nat Cerezo | 28/09/2021 12:16 | Ukuhlaziywa ukuba 28/09/2021 12:37 | Izinto kunye neeTattoos zezinto
Zintle, zilula kwaye zintle. Le yindlela isaphetha kunye neetato ezikulo. Ngale njikalanga yangeCawa sikulethela eTatuantes ukhetho lolu hlobo lweetatto esele zithandwa kakhulu kwiminyaka yakutshanje.
Kwaye oko Njengoko sisitsho, ukuba lula kwayo kunye nococeko loyilo zezinye zeempawu zayo eziphambili ezikhokelele ekusasazeni olu hlobo lweetattoo kulusu oluninzi. Ngoku, zithetha ntoni? Siyixoxa ngezantsi.
1 Iintsingiselo zokugoba kunye notolo
1.1 Iintsingiselo zotolo
1.2 Iintsingiselo ze-Bow tatto
1.3 Intsingiselo yesaphetha kunye notolo kunye
2 Uyenza njani uninzi lwe tattoo ngesi sixhobo
3 Utolo kunye neTolo Tattoos Imifanekiso
Iintsingiselo zokugoba kunye notolo
Iitattoos ezinesaphetha neentolo zineentsingiselo ezimbalwa ezithi kuxhomekeke ekubeni i tattoo imelwe kuphela lutolo, isaphetha, okanye zombini.
Lo ngumxholo onzima, kuba Intsingiselo yeetattoos zotolo zinokwahluka ngokusekelwe kwizinto ezininzi. Umzekelo, ibe sisixhobo esisetyenziswa ngabantu abaninzi ukutyhubela iinkulungwane ukuzingela nokuzikhusela, njengamaMelika Omthonyama.
Nangona kunjalo, siza kuhlalutya ezinye ukuze ucace malunga nenjongo yento oza kuyenza itattoo (sithi "injongo" kuba ekugqibeleni Okona kubalulekileyo yintsingiselo yokuba umvambo kuwe ayisiyiyo eyabanye).
Omnye Isolo utolo lunokubonisa ukuba ungomnye wabo balandela umendo wakho. Ukuba awukhathali nokuba abanye bacinga ntoni kwaye ulandela indlela ekhonjiswa lutolo lwakho, into efana nekhampasi, kwaye ihlala ibonisa ukuba unamabhongo okanye uzibophelele kwinjongo yakho. Kwelinye icala, inokuba luphawu lokhuselo, ebonisa ukuba awufuni kungqubana kodwa uzimisele ukuzikhusela xa kukho imfuneko.
Kwakhona, Utolo olwahlulwe phakathi lwalusetyenziselwa ukubonisa ukuba ukuphela kwempixano kufikelelwe okanye ufuna ukungcwaba umnqwazi. Ihlala inxulunyaniswa njengophawu loxolo. Kwi tattoo, inokubonisa ukoyisa ixesha elinengxaki.
Kwimeko isibini seentolo eziwele, zihlala zinxulumene nobuhlobo. Amaxesha amaninzi le tattoo inokwenziwa nomnye umntu njengamaTatoo amawele, ukubonisa inqanaba lokuzibophelela phakathi kwabantu ababini. Nangona kunjalo, gcinani engqondweni ukuba iintolo zikhomba kwicala elichaseneyo oko kuthetha ukuba kukho ukungqubana.
Okokugqibela, ngubani ongazaziyo iintolo zikaCupid? Ewe inokuba sesinye isizathu sokwenza umvambo. Kwaye unako efuziselwa lutolo oluwela intliziyo. Okanye inokuboniswa njengotolo olunencam okanye intsiba emile njengentliziyo.
Iintsingiselo ze-Bow tatto
Okumangalisayo kukuba Ngokungafaniyo nee-tatoo tato, kunzima ukufumana ii-tatoo apho kuphuma isaphetha esinye kuphela. Bahlala behamba notolo olunye nangaphezulu, kuba isaphetha ngokwaso sisixhobo esingenalo lonke uncedo ngaphandle kweentolo.
Enye into enokwenzeka kukuba I tattoo yesaphetha inokwenziwa njengakwimeko yeentolo eziweleyo kwaye iyitotoli eyongezelelekileyo. Ngumbono olungileyo kwisibini, enye i-tatoo isaphetha kunye nezinye iitato lutolo. Njengoko kunokuqikelelwa, inentsingiselo efanayo nale besiyichazile malunga neentolo eziwele, kuba oko kuthetha ukuba ezi zinto zombini zidibene zomelele.
Intsingiselo yesaphetha kunye notolo kunye
Ngelixa uqobo I tattoo yesaphetha kunye notolo ayinantsingiselo ithileZombini iintolo kunye nezaphetha zinxulumene ngqo nomqondiso we-zodiac weSagittarius.
Kwakhona, kuxhomekeke kwindlela eziveliswa ngayo, Intsingiselo yeentolo kwaye iarches inokunxulumana nobabini ubugcisa behlabathi njengobuchule ngelixa ugcina ubudlelwane kwilizwe lokhokho.
Kwaye kunjalo Bangumqondiso wemfazwe kunye nobukhosi bamaxesha aphakathi. Kwelinye icala, abatoli banentsingiselo enxulumene nokukhusela. Ngokukodwa, ukhuseleko olunikezelwa ngumtoli kumaxesha akudala emva komthi okanye efihliweyo ematyholweni.
Kwakhona sineentsingiselo ezininzi ezinxulumene nemeko yesaphetha notolo. Umzekelo, isaphetha esirholwe ngotolo olayishiwe lunokuthetha ukungavisisani malunga nento ethile, yiyo loo nto le tattoo ihlala ihamba kunye nento evelisa le mvakalelo. Umzekelo, ukuba siziintshaba ezifayo ze-broccoli singaba nesaphetha esalayishwe ngotolo olukhombe kule mifuno.
Ngakolunye uhlangothi, ukuba utolo luye lwadutyulwa lunentsingiselo echaseneyoUkuba uxinzelelo oluye lwanyamalala kwaye ngoku sinokulandela olo tolo luphawula indlela yethu. Inokuba nentsingiselo efanayo naleyo yotolo oluzimeleyo, apho silandela khona ukuvuka kwalo.
Okokugqibela, kukho abo bongeza umtoli okanye umtoli kwi tattoo, esele ikho asichongi isaphetha notolo kodwa ngumntu ophethe zona. Njengoko besitshilo ngaphambili, umtoli unxulunyaniswa nokhuseleko kwaye yiyo loo nto inokuqondwa kule tattoo.
Uyenza njani uninzi lwe tattoo ngesi sixhobo
Njengoko sihlala sisithi umda kukucinga kwakho, unako uxoxe ngayo nomculi wakho we tattoo ukuze ufumane uninzi lwengcamango yakho. Kwaye ngoku siza kunika umxholo umxholo othile.
Ngokuqhelekileyo I tattoo yesaphetha kunye notolo zihlala zinesimbo esincinci kwaye incinci ngobukhulu (nangona kuhlala kukho ukungafani). Amanani ejiyometri anje ngezangqa, iirhombus, iingxande, ii-ovals kunye nezikwere zihlala zisetyenziselwa ukuyinika lula ngakumbi. Kukwakho nabo bongeza ukcola okungaphezulu kwendalo ngokudibanisa i-ivy kwi-bowstring okanye ngamagqabi kwitrokhwe yotolo.
Kukho abo bakhetha yinike indawo eyimfihlo ngakumbi ngokusebenzisa i-shaft shaft ukubhala igama, njengegama lesihlobo, okanye uphawu oluthile ozibonakalisa ngalo okanye oluthandayo.
Njengoko besiphawula inokuba ngumbono olungileyo weetattoos ezongezelelekileyo. Omnye unokwenza i-tattoo isaphetha kunye nolunye utolo. Sibonile enye apho nganye nganye ifumana isiqingatha setolo. Kukho ukhetho lokwenza iintolo ezinqamlezileyo njenge tattoo yamawele, ukumela ubuhlobo obuhle.
En los Iitatto ezithi umtoli aphume sinezinto ezininzi esinokukhetha kuzo. Ukuba umtoli uyingelosi apho siya kukhuselwa nguThixo. Inokuba inguMthonyama waseMelika okanye iAmazon, eya kuthi futhi isebenzise ukwamkela indawo yethu yobufazi.
Akuthandabuzeki I tattoo yesaphetha kunye notolo ineetoni zeentsingiselo kunye namathuba, kwaye zilungele itattoo elula. Khawusixelele, ngaba unayo enye yezi zinto zenziwe umvambo? Zithetha ntoni kuwe? Ithini itattoo yakho?
Utolo kunye neTolo Tattoos Imifanekiso
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Izinto kunye neeTattoos zezinto » I tattoo yesaphetha kunye notolo, egxile kubugcisa nakwindlela yokuyila
Ukugqobhoza esinqeni nakwii-clavicles
Ezinye iitattoos zoonxantathu, ijiyometri kumandla